Aiza ny zo maha-olona ny mpiasan'ny Kaominina (Antananarivo)? | Hevitra MPANOHARIANA
Resaka Hamas sy Isiraeliana
Resaka tsy misy ifandraisany amin'ity lahatsoratra ity fa mifandray amin'ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao kosa dia ity lahatsoratra hitako tany ambadimbadika ity. Nahoana Isiraely no "voatery" nanafika an'i Gaza? Na amin'ny teny frantsay aza ataoko fa azonareo tsara ny voambara: hevitra amin'ny lafiny na fijery Isiraeliana izany no asehoko. Be loatra manko ny hevitra mivoaka avy amin'ny Arabo fa toa iniana ampanginina kosa ny hevitra Isiraeliana. Tsindrio ny anarana Adinisiraely aza fady dia ho hitanao izany.
Nampidirin'i Adinisiraely @ 22:42, 2008-12-28 [Valio]
manomboka aiza ny fahadiovana?
Ao ny milaza fa ao an-trano, ao indray ireo manao hoe fitaizana , any an-tsekoly...Na hitondra fitaovana vaovao sy raitra isanandro aza ny manam-pahefana dia tsy hahita vokany raha tsy ny fomba fisainana no miova.
Nampidirin'i mpanontany @ 10:36, 2008-12-29 [Valio]
Fa tena mba migafy kosa aloha ilay Adinisiraely e. Asa izay hevitry ny tompom-blaogy fa izahay mpamaky tena mangidihidy maso mihitsy @ilay hors sujet
Nampidirin'i Gaza @ 10:49, 2008-12-29 [Valio]
- azo lazaina ve fa tamin'ny herintaona lasa tsy nisy loto tahaka ny @ izao fotoana izao ?
- raha toa ka nadio kokoa herintaona lasa dia tsy atahorany sady tsy hajain'ny olon-tsotra izany ny mpikarakara ny tanàna ankehitriny ;
- raha toa moa ka efa naloto hatramin'izay dia marina fa ny fitaizana am-potony no tsy ampy kanefa... : "moa afaka mandray sy mampihatra izany fitaizana izany ireo mpanao maloto" ?
Nampidirin'i Rajiosy @ 11:42, 2008-12-29 [Valio]
relax enao jentl a :)
io kosa aloha tsy tokony hanaovana etat d'ame be satria asany le izy e :P
Na izany na tsy izany, raha hita fa hoe tena "inhumain" ny "conditions" hiasany, ingahy mera no tokony mba mihary fitaovana hiasany tsara. Toy ny hoe gantanana sy boots, uniforme ary zavatra hanaronany ny orony...
Ny antsika koa tokony mba asaina manao asa fanasoavana toy ny any ivelany ireny olona mpandika lalana ireny. Ohatra hoe tratra mitondra fiara nefa mamo ohatra dia mandoa lamandy kely fa tsy maintsy mande manadio tanana na otran'zany e. Oeuvre de bienfaisance hoan'ny kaominite.
Nampidirin'i simp @ 12:04, 2008-12-29 [Valio]
O letia ry rajiosy a,
fa nahoana no darohan'la baomba foana hono i palestiana e?
mba omeo fanazavana kely ny adinisraely ee :P
Nampidirin'i simp @ 12:05, 2008-12-29 [Valio]
Ny fitadroana ny fahadiovana dia mtaky vaha-olana roa:
1-lavitra ezaka ( fanabeazana)
2-Maika : asiana CCTV na olona mpitandro ny fahadiovana, toy ny mpitandro ny filaminana ny tanana sy toerana be mpanadalo rehetra (Analagama ohatra ...) ary any amin'ny toeran-kafa dia ny fokontany no handray an-tanana an'izany.
Nampidirin'i mpanontany @ 12:14, 2008-12-29 [Valio]
Tamin'ny taona 1996 no nahitako an'Antananarivo naloto tsy nisy ohatra izany. Fako miavovona no nataon'ny olona tao amin'ny tsenana'Andravoahangy rond-point. Tsy fantatro aloha izay lehiben'ny tanana tamin'izany. Razanamasy? Iny amin'ny Avenue manamorona ny lapan'ny tanana may iny moa dia namofona nampihoaka mihitsy. Saika tsy hiverina tany Iarivo aho nandritry ny taona vitsivitsy fa kivy. Taty aoriana moa dia nadio ny tanana na dia feno setroky ny taxi be aza ny rivotra. Porofo izany fa mety miova ny toe-tsaina, ka nahoana amin'izao fotoana no tsy miraharaha indray ny olona. Ao raha. Ho any indray aho amin'ny janvier izao ary toa kivy ambony ihany amin'ity fitantaran'i Jentlisa azy ity. Raha izao aloha no mitohy dia tsy ataovy nofinofy ihany izany fivoarana izany e. Ho lany amin'ny fanadiovana ny tanana ny vola tokony hampiasaina amin'ny zavatra hafa mahasoa.
Nampidirin'i Su @ 15:56, 2008-12-29 [Valio]
mamerina sy manantitra
ny resaka fahadiovana dia miankina amin'ny tsirairay , alohan'ny zavatra rehetra.Ny tsirairay no tokony hiezaka hanadio ny sainy ,ny vatany ary ny manoloana sy tandrify azy.Matoa mbola miverina ny loto dia midika izany fa tsy niova ny toe-tsaina .Ka na hanafatra fitaovana sy hametraka ben'ny tanana vaovao isan-kerinandro aza dia tsy hisy vokany.
Nampidirin'i mpanontany @ 17:43, 2008-12-29 [Valio]
Raha resaka loton'Antananarivo no resahina dia ady hevitra lehibe ,fa izao fotsiny no mba tiako ho tsindrina
Ny mponina tsirairay avy dia samy tokony hanaja ny fahadiovana indrindra ny manodidina azy ,tsy hanao maloto etsy sy eroa (valan drano,valam betiny,degoba ,sns ....)
Etsy an-daniny koa dia ,ankoatra ireo mpiasan'ny kaominina nolazai'i Jentl teo dia tokony hanampy ny mponina koa ny kaominina @ fametrahana toerana hanaovana izany maloto izany.
Ny fanabeazana sy ny fampivoarana ny toe tsaina ihany koa anefa no apinga ahatratrarana ireo
Nampidirin'i Maritoa @ 19:25, 2008-12-29 [Valio]
simp : aoka ho tsinjovina ny fahadiovan'ity sehatra ity. aoka ho an i kaisara izay an'i kaisara ary ho an'i jentilisa izay an' jentilisa e ...sns tsy voatanisa :-)
Nampidirin'i Rajiosy @ 19:46, 2008-12-29 [Valio]
ary mba manahoana ny dioan'i Jerosalema ry zalah :P
sao dia tokony asaina manao stazy any aloha ra-tgv :)
Nampidirin'i simp @ 16:02, 2008-12-30 [Valio]
Ohatry ny misy fitoviana eo amin'ny zavamisy any Isiraely sy Gaza, ny Silamo mahery fihetsika tokoa anie ny zavanisy teto Antananarivo e!
Nampidirin'i jentilisa @ 16:39, 2008-12-30 [Valio]
marina aloha fa asany io ary rariny raha tokony hanao ny asany ao anatin'ny ara-dalana ry zareo zany hoe ampy fitaovanahanatanterahany an'izanyasany izany.
Inona anefa ireo fitaovana ireo ary iza tamin 'ireo ben'ny tanana nandalo teo no mba efa nanome tampim-bava ho an'ireny mpiasan'ny commune mandio fako eny analakely ireny ?????
-ho an'ny sarababem-bahoaka : tandrovo hatrany ny fahadiovana ary ovao ny totsaiana tia manipitsipy sy tia mandoto fa hjoe efa misy hanao io ary izay no hanaramana azy
-ho an'ny mpitondra ny tanana : omeo fitaovana ara-dalana ny mpiasa farafaha ratsiny mba hahafahany miaro ny tenanay amin'ny maha olombelona azy indrindra eo amin'ny fahasalamana
marina ra jentl fa tsy ho ela intsony dia ho azon'ny tananan'Antananarivo ny meday volamena ny fahalotoana raha toa ka mbola minia manao sy mandoto arak'izay tiany ihany ny vahoaka rehetra monina sy mandalo eto
Nampidirin'i ravatorano @ 15:23, 2008-12-31 [Valio]